Boycott - 6- လာပြီ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ဘို့ မဲမပေးဘို့ ဒီ boycott ကိုဖတ်ကြစို့
Posted by 4shokelay at 7:39 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 8:16 PM No comments:
They are working for boycott 2010 Election!
Posted by 4shokelay at 2:35 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 9:54 AM No comments:
Boycott 2010 Vol. 5
You can Read !
Posted by 4shokelay at 8:36 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 11:31 AM No comments:
ဘွိုင်းကောက် ၂၀၁၀ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂) ကို မိတ်ဆွေများ ဖက်ရှု့နိုင်ဘို့
Posted by 4shokelay at 8:02 AM No comments:
Boycott 2010 Vol.1
၄င်း ဂျာနယ်ပါဖေါ်ပြချက် အရ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် မတိုင်ခင်ထိ ၂ ပတ် ၁ ကြိမ်ထုတ်သွားမည်ဟုသိရ..................
Posted by 4shokelay at 5:10 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 8:09 PM No comments:
2010 ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ဖို့ လိုသလိုအသုံးချနိုင်ပါပြီ........
Pamphlet Anti 2010
Posted by 4shokelay at 10:13 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေ သပိတ်ကော်မတီ ဖွဲ့...
တပြည်လုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေ သပိတ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေး...